Kojo – Wɔn a Woafi Yehowa Adansefo Mu – 4Jehovah (Yehowa)
Posted in Wɔn a Woafi More, Wɔn a wɔnyԑ Yehowa Adansefo bio no Osuahu
Wɔ afe 2000 mu no, Kodwo hyirae ne ho so maa Onyankopɔn gyei asubɔ. Wɔ n’asubɔ akyi bere tiawa bi no, ɔbɛyɛe nsi wɔ asɛmpaka ne ɔkyerɛkyerɛ adwuma no mu wɔ ne sukuu nyinaa a ɔkɔe asasesin mu, efisɛ na Ɔwɛn Aban gyidi a woakyikyim no no ama woagye adi sɛ wɔn som ne Onyankopɔn asase so Ahyehyɛde biako pɛ a ɛwɔ hɔ a ɔrekyerɛkyerɛɛ nnipa a wobetie asɛmpaka no de wɔn akɔ nkwagye mu, efisɛ nsɔre no nyinaa yɛ atoro. Kodwo gyei toom mu, efisɛ na osusuwii sɛ sɛ asɔre bi bɛyɛ nokware a ɛsɛ sɛ ne gyidi ne nkyerɛkyerɛ nyinaa gyina Bible no so. Nanso, na eyi nte saa wɔ nsɔre ahorow no mu, efisɛ na wogye gyidi ahorow a edidi so yi di: Wodi buronya ne Awoda, wɔnnnyɛ afie ne afie asɛmpaka adwuma no bi, wɔkyerɛkyerɛ sɛ nnipa apapafo nyinaa bɛkɔ ɔsoro, wɔkyerɛkyerɛ sɛ wɔde abɔnefo nyinaa bɛkɔ daa asotwe atrae, ne afoforo a ɛkeka ho.
Nanso wɔ ɔsram August mu, afe 2012 no, onyae ntease a emu dɔ wɔ Bible no mu, a ɛno maa ohui sɛ Ɔwɛn Aban gyidi ahorow nyinaa nyɛ nokware, nti ɔkyerɛwee kɔmaa Ɔwɛn Aban Asafo Ti sɛ wɔnnyɛ nsakrae wɔ wɔn gyidi ne wɔn nkyerɛkyerɛɛ no mu. Eyi akyi bere tiawa bi no, Kodwo huui sɛ Ɔwɛn Aban Asafo no NNIM Yesu Kristo nti ofii Ɔwɛn Aban Ahyehyɛde no mu kɔhwehwɛɛ Yesu. Na ɛnam internɛt adwumakuw yi (4witness.org -Witnesses for Jesus) so no ohuui Yesu Kristo sɛ Ɔne NOKWARE NO, ne NKWA NO ne ƆKWAN NO. Kenkan Kodwo osuahu no wɔ wɔn a woafi Yehowa Adansefo mu.
Tagged 144000 Kuw a Wɔasra wɔn, Paradise ne Ahenni no
← Nokwasԑm A Ɔwԑn Aban Asafo (Watchtower Society) Mpԑ SԑWohu
Yesu ɔsɔree fii awufo mu wɔ honhom nipadua a aniwa ntumi nhu? →